Sidee uga bixi karnaa qaran-jabka nuga dhacay? | KEYDMEDIA ONLINE
Sidee uga bixi karnaa qaran-jabka nuga dhacay?
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabbdishakuur Warsame, ayaa soo jeediyay dhowr qodob oo ay tahay in la sameeyo si shacabka Soomaaliyeed uga baxo tiiha iyo tiiraanyada dul saran muddada dheer.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida la rumeysan yahay qaran-jabka Soomaaliya waxaa horseeday gabbood-fal karaara dhaafay oo uu geystay nidaamkii kali taliska ahaa ee uu hoggaanka u yahay Maxamed Siyaad Barre, kaas oo tobankii sano ee danbeeyay ee muumulkiisa, hirgaliyay eex iyo addiyad Soomaali ilaa maanta isugu soo laaban la’dahay.
Sida muuqata wali lugta lama saarin toobiyaha toosan, hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabbdishakuur Warsame, ayaana soo jeediyay in la hir galiyo dhowr arrin oo muhiim ah, si Soomaalidu uga baxdo qaran-jabka ku dhacay ee horseeday hoogga, qabjab-ka, iyo sharaf dhaca.
“Waxaa innaga saari kara gefkeena iyo gaboodfalkii la gaystay oo aan garawshiyo ka bixino, meel iska dhigno aragtida dhagar maleegga ku dhisan (Conspiracy Theory), fahamno caqabadaha inagu horgudban iyo fursadaha aan haysanno, la imaanno karti, xirfad iyo xeelad aan ku furdaaminno taxiyaadka, kagana dabaalanno meertooyinka iyo masaalixda isku milgan ee gobolka iyo dunida?. Ayuu yiri Warsame.
Hoggaamiyaha Wadajir wuxuu hoosta ka xariiqay in dhibaatada Soomaaliya ka taagan looga bixi karin, tabasho, eed sheegad iyo faan, wuxuuna qodobadaas ku tilmaamay kuwo loga cararayo masuiliyadda.
Guddiga La dagaallanka Musuq-maasuqa oo ka digay wax is daba marin
Warar 21 June 2021 21:22
Guddiga Madaxa Bannaan ee La-dagaallanka Musuqmaasuqa, ayaa ku baaqay in fursadaha ol’olaha doorashada ay noqdaan kuwo ay u siman yihiin dhamaan musharaxiinta, waxayna ka digeen wax is daba-marin iyo musuqmaasuq.
Marka hantida dad weynaha xilka lagu raadsanayo
Warar 21 June 2021 20:00
Xog: Maxaan ka ognahay jadwalka doorashooyinka dalka?
Warar 21 June 2021 15:49
Warar 21 June 2021 15:24